देशभरका बिरामी काठमाडौं केन्द्रित बन्दा ठूला सरकारी अस्पतालमा आईसीयू अभाव, शुक्रराज ट्रपिकललाई कसैले विश्वास गरेनन् – Mission Khabar
देशभरका बिरामी काठमाडौं केन्द्रित बन्दा ठूला सरकारी अस्पतालमा आईसीयू अभाव, शुक्रराज ट्रपिकललाई कसैले विश्वास गरेनन्
मिसन खबर ६ पुष २०७५, शुक्रबार ०७:२३
काठमाडौँ– सरकार सबै नेपालीको पँहुचमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने दाबी गरिरहेको छ । तर देशको सरकारी अस्पतालको उपचार धेरैको पँहुचभन्दा बाहिर पुग्न थालेको छ । कारण हो, बिरामीको चाप बढेसँगै अस्पतालको भौतिक तथा जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापनमा राज्यले वास्ता नगर्नु ।
अहिले देशका ठूला सरकारी अस्पतालमा सामान्य उपचारका लागि घण्टौँको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बिरामीले सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) पाउनै कठिन बन्न थालेको छ । देशकै केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा परिचित वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालको आईसीयू सबै सर्वसाधारणको पँहुचमा छैन । यहाँको बेड पाउन निक्कै कठिन छ । कतिपय बिरामी आईसीयूको शैय्या पाउन उच्च तहका नेता तथा मन्त्रीबाटै फोन गराउनुपरेको बताउँछन् । यसले पनि ठूला सरकारी अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन निक्कै पछाडी भएको देखाउँछ । साथै देशभरका बिरामीले काठमाडौं केन्द्रित उपचारमा विश्वास गर्दा अस्पतालमा निक्कै ठूलो भीडभाड हुँदैआएको छ ।
यता, टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पतालको आईसीयू भने सधै बिरामीलाई कुरिरहेको छ । यहाँको आईसीयू कक्ष प्रायः खाली रहदै आएको छ । चारवटा आईसीयू कक्षमध्ये दुईवटामा भेन्टिलेटर जडान गरिएको छ । चारवटै आईसीयू सहज रूपमा सञ्चालित भएपनि बिरामी पुग्दैनन् । शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे आईसीयूमा राख्ने बिरामी आउँदा सरकारी अस्पतालले नै निजी अस्पताल सिफारिस गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । बिरामीहरु पनि यहाँको आइसीयूलाई वेवास्था गर्छन ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा र अस्पताललाई प्रादेशिक रुपमा विस्तार नगर्ने हो भने अहिलेको समस्या झनै बिकराल बन्ने देखिन्छ । जिल्ला तथा क्षेत्रीय रुपमा खुलेका ठूला सरकारी अस्पतालको उपचार सेवा, पूर्वाधारमा सुधार गर्दै स्थानीय र जिल्ला तहमै ठूला तथा जटिल रोगको उपचार सम्भव छ भन्ने चेतानाको विकास गर्न सरकारले अभियान चाल्नुपर्छ । हैन भने सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रतिको विश्वास आम नागरिकमा घट्ने मात्रै छैन्, पैसाका लागि जे जस्तो प्रपञ्च रच्नपनि पछि नपर्ने निजी अस्पतालको मनोमानी झनै बढ्ने छ । निजीलाई ब्यालेन्स गर्न पनि सरकारी अस्पतालको उपचार सेवा सुधार आवश्यक छ ।
बिरामी मात्रै बढेका हुन वा सरकारले आफ्ना अस्पतालको समय सापेक्ष सुधार गर्न नसकेको हो ? यसमाथी समिक्षा गर्ने कि ?